आज बुधबार ई. सं. २०२० मे १३ बि.सं. २०७७ साल वैशाख ३१ गतेको राशिफल – SwissNepal.com
आजको राशिफल बि.सं. २०७७ साल वैशाख ३१ गते बुधबार
आजको राशिफल बि.सं.२०७७ साल वैशाख ३१ गते बुधबार ई. सं. २०२० मे १३ , नेपाल सम्बत ११४० बछलाथ्व षष्ठी, प्रमाधि नामक संवत्सर, सूर्य उत्तरायन, वसन्त ऋतु, ज्येष्ठ कृष्ण षष्ठी, चन्द्रमा मकर राशिमा, श्रवण नक्षत्र, शुक्ल योग, वणिज करण । नेपालमा सूर्योदय बिहान ०५ः१६ बजे, सूर्यास्त साँझ ०६ः४५ बजे हुनेछ । आज जन्म लिने बच्चाको मकर राशि हुनेछ । आज महत्वपूर्ण कार्यका लागि बाहिर निस्कनु पर्दा तिल वा धनियाँ मुखमा राखेर जुनसकै दिशाको यात्रा गरेपनि शुभ फल प्राप्त हुनेछ । कुनै महत्वपूर्ण कार्यको शुरुवात वा शुभ यात्रामा निस्कन आजका लागि शुभ समय विहान ५ बजेर १६ मिनेट देखि ८ बजेर ३९ मिनेट सम्म छ । यो समय नेपालको राष्ट्रिय समयमा आधारित समय हो । ठाउँ अनुसार समय, तिथि, नक्षत्र, ईत्यादीमा पनि अन्तर हुनेछ ।
विभिन्न जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुका साथै दौडधूप गर्नु पर्नेछ । यात्रा रमाइलो हुनेछ । उपहार प्राप्त हुने सम्भावना छ । स्वास्थ्यमा अचानक सानो समस्या देखिन सक्छ, तर डराइ हाल्नु पर्दैन । आफन्तहरूबाट भनेजस्तो सहयोग नपाइएला, तर काममा बाधा हुनेछैन । साथीहरूसित मनोरञ्जनको अवसर जुर्नेछ । प्रयाससाध्य समय छ धैर्य गरी मिहिनेत गरेमा कार्यसिद्धि हुनसक्छ । प्राविधिक काममा सफलता प्राप्त हुने छ । विद्यार्थीहरूको आत्मविश्वास जाग्नेछ र मान्यजन तथा अभिभावकको आशीर्वादले काम गर्नसक्ने दिन छ, श्रममूलक काममा मन जानेछ । स्वास्थ्य सबल रहने छ । व्यवसाय बढाउने वा नवीन रोजगारीको अवसर आउने छ ।
नवौं भावमा चन्द्रमा रहेकाले सुखसुविधा र आनन्द प्राप्तिका लागि मन लालायित बन्नसक्छ । त्यसैले सामाजिक वा सांस्कृतिक क्रियाकलापमा सहभागी बन्नु राम्रो हुन्छ । व्यक्तिगत मानसम्मानको रक्षाका लागि प्रयास हुनेछन । रोकिएका काम ढिलो गरी बन्नेछन। धार्मिक वा सांस्कृतिक महत्वको यात्राको सम्भावना छ । झर्कोलाग्दो दिन भएपनि साँझमा शुभ कुराको सङ्केत मिल्नेछ । बिर्सिसकेको आफन्त वा साथीभाइसित भेटघाटको सम्भावना छ । गृहिणीहरूलाई कामधन्दामा सहयोग प्राप्त हुने समय छैन, जेगरे पनि पाखुरी खियाउनै पर्छ, यद्यपि धन, मान र प्रतिष्ठामा कमी हुनेछैन । छात्रछात्राले कर्म गरेअनुरूप भाग्य निर्माण हुने दिन छ ।
प्रेमसम्बन्धमा निरसता छ । शरीरमा आलस्य र थकानको अनुभव हुनेछ । स्वास्थ्यप्रति पनि सचेत हुनुहोला । आठौं घरमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले किसिमकिसिमका समस्याहरू निम्त्याउनसक्छ, झैझगडा र मुद्दामामिलाभन्दा टाढै बस्नु उचित हुनेछ । यात्रा घातक बन्न सक्छ, लामो दूरीको यात्रा प्रारम्भ गर्नु हुँदैन । तपाईंको व्यक्तिगत दृष्टिकोण उल्टो हुने देखिन्छ, बोलेर भनेको कुराले विपरीत अर्थ प्रदान गर्न सक्छ । धन, धर्म र भाग्यमा हानी पुग्ने सम्भावना छ । गर्नु नपर्ने काम पनि बढी समय लगाएर गर्नु पर्ला । अप्रिय समाचार सुन्नु पर्दा मन खिन्न हुनेछ । प्रतिकूल समयले घेरेको छ, संयम रहनु होला ।
आज आमा वा मामाको आशीर्वादले काम गर्न सक्छ । मनमा शान्तिको अनुभूति हुनेछ । छात्रछात्राको मन सिर्जनात्मकता र व्यवहारिकतातर्फ आकर्षित हुनेछ । गृहिणीहरूले घरायसी समस्या समाधान गर्न सक्नेछन। माया र प्रेमको वातावरण तैयार हुनेछ । तर्क, विवाद र झैझगडा जस्ता क्षेत्रबाट लाभ मिल्नेछ । आवश्यक र उपलब्धीमूलक रमाइलो यात्रा हुनसक्छ । दूरदराजको यात्राको सम्भावना छ । वैदेशिक प्रयोजनका लागि गरिएको प्रयास सार्थक हुनेछ । स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले समेत यो राम्रो समय छ । आर्थिक लाभ हुनेछ । ऋणसापटी लिनदिन आजको दिन अनुकूल छ ।
बुद्धिपक्ष र प्राज्ञिक क्षेत्रमा राम्रो छ । पठनपाठन र बौद्धिक गतिविधिका कारण मानसम्मान र प्रतिष्ठामा बढोत्तरी हुनेछ । अध्ययन, अध्यापन र लेखनकार्यमा उच्च सफलता प्राप्त हुनेछ । खासगरी विद्यार्थीहरूले बौद्धिक क्रियाकलापप्रति झुकाव बढाउनु जाति हुन्छ । व्यावहारिक र प्राविधिक काममा विशेष सफलता प्राप्त हुनेछ । गृहिणीहरूलाई भाइबहिनी र छोराछोरीले सहयोग गर्नेछन। सन्ततिपक्षबाट पनि खुसीको समाचार प्राप्त हुने छ । मन प्रफुल्ल र उत्साही बन्ने छ । घरपरिवारमा रमाइलो जमघट हुने छ । तपाईंले गर्न लागेको काममा सबैले साथ दिनेछन र साँझमा दिनभरिका क्रियाकलापको लेखाजोखा गर्न मन लाग्नेछ ।
चौथो घरको चन्द्रमाले मानसिकतामा थोरै विचलन ल्याए पनि प्रणयसम्बन्ध र प्रेमको वातावरण बन्नेछ । सन्तति पक्षको साथसहयोग प्राप्त हुनेछ । घरायसी सुखको अनुकूलता हुनेछ । नातागोता र आफन्तजनसँग भेटघाटको योग छ । दीर्घकालिक प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा धन लगानीको सम्भावना छ । आफन्त, नातागोता वा घरपरिवारबाट आवश्यक सहयोग प्राप्त हुनेछ । छात्रछात्राले परिश्रम गरेबमोजिम प्रतिष्ठा प्राप्त गर्नेछन । कर्मचारीहरूले हाकिम वा विशिष्ट व्यक्तिको सल्लाह र परामर्श प्राप्त गरी रोकिएको काम बनाउने समय छ । सबै जातकको मन बढ्ने योग छ र सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त हुनेछ ।
सामाजिक काममा संलग्न हुनुपर्ला । खासगरी छात्रछात्राले सहकार्यका माध्यमबाट विशेष ज्ञान प्राप्त गर्ने दिन छ । प्रायः सबैले पेसाव्यवसाय वा रोजगारीका क्षेत्रमा सम्मान र साख जोगाउन सक्नेछन, आकाङ्क्षा पूर्ण हुनेछन । आम्दानीमा कमी आउने छैन । व्यापारिक वा दैनिक कामहरू सन्तोषजनक ढंगले सम्पन्न हुनेछन। अर्थलाभका अवसर आउने छन। धार्मिकरसामाजिक काममा प्रशंसित हुने अवसर प्राप्त हुनेछ । तीर्थव्रत तथा देवालय आदिको भ्रमण हुनसक्छ । दिदीबहिनी वा कुटुम्बका काममा सघाउनु पर्नेछ । मेवामिष्ठान्न र परिकार मिल्नेछ । प्रतिष्ठा बृद्धि गर्ने समय चल्दैछ ।
नेपालमा पहिलो पटक स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोनाको संक्रमण